Feno 9 taona nizarana ny kanto ny PoetaWebs - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
PoetaWebs. Araka izany anarana izany dia eo amin’ny tontolon’ny internety na aterineto no hifaneraseranao amin’ny PoetaWebs syireo mamelona io tranonkala io. Tamin'ny 30 avrily 2009 mantsy no nivoahan'ny "Aingam-panahy", lahatsoratra voalohany tao amin'io tranonkala io izay nosoratan'i Fredy Jaofera. Rehefa nandinika sy namakafaka i Toetra Ràja, poety tompon-kevitra amin'ny tokony hanokanana saha iray ilomanosan'ny tontolon'ny pôezia eto amin'ny aterineto, dia niray feo izy roalahy fa hatsangana ny tranonkala.
Ahitana efitra efatra tsikaritra hatrany am-boalohany ao an-trano.
Ao no itafatafana amin’ny Poety sy ireo olona fantatra fa manan-kolazaina momba ny Poety sy ny poezia. Anjatony ireo vahiny efa nasaina tao, anisan'izany i AéRa (André Rakotondranaivo), Om-Gui (iray andro talohan’ny nahafatesany), Saholimalala Rabarimanantsoa, Niry-Solosoa, Zo Maminirina, Ny Eja sns.
Azo lazaina ho efitry ny fitoniana ny ao satria ahitana fanadihadiana ny endrika sy atin'ny tononkalo, fandalinana ny tontolony ary fanaposahana ny mombamomba ny Pôety. Hatramin'ny voalohan'ity taona 2018 ity dia mampiely biografian'ireo Poety efa nodimandry iray isam-bolana (isaky ny faha 15'ny volana) ny Pôetawebs.
Efitra ifaneraseran'ny Poetawebs amin'ny Poety ankehitriny ny Sehatra ka itaterana ireo hetsika tononkalo amin'izao fotoana izao toy ny antsa sy ny tsangan-tononkalo mba ho hitan'ny besinimaro.
Midadasika ity efitra ity satria itoeran'ny vaovao samihafa toy ny boky vao nivoaka, velakevitra, fanazavana sy filazana samihafa...
Valo mianadahy ireo Poety miara-misalahy ao aminy: Hajaina, Ikaloyna Vony, Léa Fandresena, Hanitr'Ony, Doda Razafindravelo, Heriarilala Andriamamonjy, Toetra Ràja ary Tsikimilamina Rakotomavo. Tsy poety fe poety ihany izy ireo fa mivelatra amin’ny sehatra samihafa amin'ny lafin'ny sy teny sy ny soratra: Akademisianina, Mpikaroka, Tomponandraikitra ao amin’ny Ministeran’ny Kolontsaina, Mpanao gazety, Mpikabary, Mpampianatra teny malagasy sns.
Loharanom-baovao matotra ny Pôetawebs ary izay voasoratra ao dia mora zahana ho an’ny mpianatra, mpampianatra sy mpikaroka, mpankafy tononkalo ary antenaina hitoetra ho an’ny taranaka mifandimby.
Ny Poetawebs dia misokatra ho an'ny rehetra izay manam-baovao hampitaina sy mangetaheta fanampim-panazavana. Mankasitraka ny rehetra nanjohy hatrany ny tranonkala nandritra izay sivy taona izay koa ny Pôetawebs ary maniry ny hampaharitra ny rohy eo amin'ny tontolon'ny haisoratra.
Après can 2019 : Mamy Gervais remercie et encourage les jeunes d'Ambohijanaka - il y a 1 jour
Resa-poty : Fan Zone - il y a 7 jours